May 2020 - Boga Wise Man
Siduu uu ugu talo galay waxay ahayd laba todobaad kadib dhalashadiisii 29aad. Wuxuu taagnaa marxaladii uu inbadan usoo diyaar garoobayay. Qorshihii uu soo dhisayay shantii sano ee ugu dambeeyey ayuu gebo-gebaynayay caawa Siciid. Waxa uu fadhiyey goobtii bunka ee Time and Space. Xalay ayay ahyd markii uu u diray halka imtixaan afartii hablood ee uu […]